မိခင်တွေရဲ့ ဆုံးမသွန်သင်မှုကို မြင်သာစေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား (၂) ကား - For her Myanmar
မိခင်တွေရဲ့ ဆုံးမသွန်သင်မှုကို မြင်သာစေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား (၂) ကား
မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာတရားနဲ့ ဆုံးမမှုတွေဟာ ကလေးတစ်ယောက်အပေါ် ဘယ်လောက်သက်ရောက်မှုရှိနေလဲဆိုတော့…
ဒီတစ်ခေါက် ရုပ်ရှင်အညွှန်းမှာ မိခင်တွေရဲ့ ဆုံးမသွန်သင်မှုက သားသမီးတွေအတွက်ဘယ်လောက်တောင် အရေးပါတယ်ဆိုတာ မြင်သာစေတဲ့ ရုပ်ရှင်နှစ်ကားကို ညွှန်းပေးမယ်နော်။ မိခင်ဆိုတာက သားသမီးတွေရဲ့ ဘဝကို ထိန်းကျောင်းပဲ့ကိုင်ပေးနိုင်သူတွေမို့ သူတို့ကသာ ကောင်းမွန်တဲ့ ပဲ့ကိုင်မှုတွေပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် သားသမီးတွေဘေးမှာ သူတို့ မရှိတော့သည့်တိုင်အောင် သူတို့ရဲ့ ဆုံးမပဲ့ပြင်ပေးမှုတွေက သားသမီးတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာစွဲမြဲကျန်ရစ်နေတယ်ဆိုတာ မြင်သာစေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေပေါ့။
ပထမရုပ်ရှင်က Forrest Gump ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ။ ဒီရုပ်ရှင်က ကြည့်ဖူးသူတိုင်း ဘယ်တော့မှ မေ့မရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပြီး အဲဒီရုပ်ရှင်ကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေက ယနေ့ထက်တိုင် လူတွေကြားပြောနေဆဲ ရုပ်ရှင်တစ်ကားပါ။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ အော်စကာဆုပေါင်းများစွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်တကားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဟာ Forrest Gump ဆိုတဲ့ ထူးခြားတဲ့နာမည်နဲ့ ထူးခြားတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးဘဝက Forrest Gump ဟာ ဉာဏ်ရည်မမီတဲ့ အပြင် ခြေတစ်ဖက်ပါမသန်တဲ့ ကျောင်းသားလေးပါ။ ကျောင်းမှာဆိုလည်း ကျောင်းသားတွေကအနိုင်ကျင့်ကြသလို ဉာဏ်ရည်နိမ့်လို့ ကျောင်းမှာ လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ အပြောခံရတဲ့ ကောင်လေးပေါ့။
ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေ ကြုံရတာတောင် ဘယ်တော့မှ စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ ဘေးမှာအမြဲဖေးမတတ်သူက Forrest ရဲ့ မေမေ ပါ။ မင်းက သာမန်လူတွေနဲ့ မတူဘူးလို့ တခြားသူတွေ ခွဲခြားတာကို လက်မခံဖို့ အမြဲဆုံးမပါတယ်။
လူတွေကForrest ကို ငတုံးကောင်လို့ နှိမ်ကြတဲ့အခါ Forrest လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ကျွန်တော် တကယ်ပဲ ငတုံးကောင်လားလို့ သူ့မေမေကို မေးတော့ သူ့မေမေက ဒီလိုပြောပါတယ် “stupid is as stupid does” ( မိုက်မဲတဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုလုပ်သူတွေမှ ငတုံး) တဲ့။ Forrest ရဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး သူ့ကို ငတုံးလို့ခေါ်ခံရတိုင်း ” မိုက်မဲတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်သူတွေမှ ငတုံးလို့ တုံ့ပြန်တော့တာပါပဲ။
နောက်ထပ် Forrest ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တဲ့ သူ့မေမေရဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါက “ဘဝဆိုတာ ရသာစုံ ချောကလက်ဘူးတစ်ဘူးပဲ။ မင်းအတွက်ဘာရမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူး” တဲ့…
ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းဆိုတာကို ပြောပြဖို့ခက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးက Forrest ရဲ့ တစ်ဘဝလုံးမှာ ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတွေကို သူများနဲ့မတူတဲ့အတွေးအမြင်တွေနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းခဲ့ပုံတွေကို ရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Forrest ရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေ၊ အတွေးအမြင်တွေက ထူးခြားတာကြောင့် ယောင်းတို့ ဘဝအခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတိုင်း ခွန်အားတွေရနေစေဖို့ Forrest Gump ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်။
Related Article >>> ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုအတွက်ဆို ဒီရုပ်ရှင်(၂)ကားကို ကြည့်ကြည့်ပါ။
နောက်ထပ် ရုပ်ရှင်တစ်ကားကတော့ The Blind Side ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး အော်စကာဆုတွေ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းက Big Mike ဆိုတဲ့ အင်မတန်ထွားကျိုင်းတဲ့ လူမည်းကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ သူ့ရဲ့မွေးစားမိခင်လူဖြူအမျိုးသမီးတို့ကြားထဲကမေတ္တာကို ရိုက်ပြထားတာပါ။
Big Mike ဟာ ထွားကျိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ မလိုက်အောင် ကြောက်တတ်ပြီး စိတ်အားငယ်တတ်သူတစ်ဦးပါ။ ဒီလိုဖြစ်ရတာကလည်း သူဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘမေတ္တာကို မရရှိခဲ့လို့ပါ။
သူ့ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူဟာ ဆေးစွဲနေသူဖြစ်ပြီး ဖခင်ကလည်းသေဆုံးသွားပါပြီ။ သူဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက မွေးစားမိဘတွေအိမ်မှာကျင်လည်ခဲ့ရသလို ဘယ်မှာမှလည်းတာရှည်မနေဘဲ ထွက်ပြေးလေ့ရှိပါတယ်။
တစ်ရက်တော့ သူဟာ ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းလူဖြူကောင်မလေး ကိုလင် နဲ့ ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့သလို သူ့မိဘတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ကိုလင်ရဲ့ မိခင် Leigh Anne က မိဘမဲ့ Big Mike ရဲ့ ဘဝကိုစာနာတာကြောင့် သူတို့အိမ်မှာလာရောက်နေထိုင်စေပါတယ်။ Leigh Anne တို့ မိသားစုနဲ့ Big Mike တို့ တဖြည်းဖြည်း သံယောဇဉ်ဖြစ်လာကြပြီးနောက် Leigh Anne က Big Mike ကိုတရားဝင်မွေးစားပြီး အောင်မြင်တဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ….
မတူညီတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပေမဲ့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး မေတ္တာထားကြပုံတွေ၊ မိခင်တစ်ဦးရဲ့ မေတ္တာနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုက လူသားတစ်ယောက်ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပုံတွေကို The Blind Side ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ..
ကဲ ယောင်းတို့ အားလပ်ချိန်မှာ ဖျော်ဖြေမှုတင်သာမက၊ စိတ်ခွန်အားတွေရနိုင်မယ့် ဒီရုပ်ရှင်ကားတွေကိုကြည့်ပြီး အကျိုးရှိရှိဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေနော် …
မိခငျတဈယောကျရဲ့ မတ်ေတာတရားနဲ့ ဆုံးမမှုတှဟော ကလေးတဈယောကျအပျေါ ဘယျလောကျသကျရောကျမှုရှိနလေဲဆိုတော့…
ဒီတဈခေါကျ ရုပျရှငျအညှနျးမှာ မိခငျတှရေဲ့ ဆုံးမသှနျသငျမှုက သားသမီးတှအေတှကျဘယျလောကျတောငျ အရေးပါတယျဆိုတာ မွငျသာစတေဲ့ ရုပျရှငျနှဈကားကို ညှနျးပေးမယျနျော။ မိခငျဆိုတာက သားသမီးတှရေဲ့ ဘဝကို ထိနျးကြောငျးပဲ့ကိုငျပေးနိုငျသူတှမေို့ သူတို့ကသာ ကောငျးမှနျတဲ့ ပဲ့ကိုငျမှုတှပေေးနိုငျမယျဆိုရငျ သားသမီးတှဘေေးမှာ သူတို့ မရှိတော့သညျ့တိုငျအောငျ သူတို့ရဲ့ ဆုံးမပဲ့ပွငျပေးမှုတှကေ သားသမီးတှရေဲ့ ရငျထဲမှာစှဲမွဲကနျြရဈနတေယျဆိုတာ မွငျသာစတေဲ့ ရုပျရှငျကားတှပေေါ့။
ပထမရုပျရှငျက Forrest Gump ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျပါ။ ဒီရုပျရှငျက ကွညျ့ဖူးသူတိုငျး ဘယျတော့မှ မမေ့ရတဲ့ ရုပျရှငျကောငျးတဈကားဖွဈပွီး အဲဒီရုပျရှငျကပေးတဲ့ သငျခနျးစာတှကေ ယနထေ့ကျတိုငျ လူတှကွေားပွောနဆေဲ ရုပျရှငျတဈကားပါ။ ၁၉၉၄ ခုနှဈမှာ ရုံတငျပွသခဲ့တဲ့ ဒီရုပျရှငျကားဟာ အျောစကာဆုပေါငျးမြားစှာသိမျးပိုကျနိုငျခဲ့တဲ့ ရုပျရှငျတကားဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျဇာတျလမျးဟာ Forrest Gump ဆိုတဲ့ ထူးခွားတဲ့နာမညျနဲ့ ထူးခွားတဲ့လူတဈယောကျအကွောငျးကို ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။ ကလေးဘဝက Forrest Gump ဟာ ဉာဏျရညျမမီတဲ့ အပွငျ ခွတေဈဖကျပါမသနျတဲ့ ကြောငျးသားလေးပါ။ ကြောငျးမှာဆိုလညျး ကြောငျးသားတှကေအနိုငျကငျြ့ကွသလို ဉာဏျရညျနိမျ့လို့ ကြောငျးမှာ လကျမခံနိုငျဘူးလို့ အပွောခံရတဲ့ ကောငျလေးပေါ့။
ဒီလို အခွအေနမြေိုးတှေ ကွုံရတာတောငျ ဘယျတော့မှ စိတျဓာတျမကဖြို့ ဘေးမှာအမွဲဖေးမတတျသူက Forrest ရဲ့ မမေေ ပါ။ မငျးက သာမနျလူတှနေဲ့ မတူဘူးလို့ တခွားသူတှေ ခှဲခွားတာကို လကျမခံဖို့ အမွဲဆုံးမပါတယျ။
လူတှကေForrest ကို ငတုံးကောငျလို့ နှိမျကွတဲ့အခါ Forrest လေး စိတျမကောငျးဖွဈပွီး ကြှနျတျော တကယျပဲ ငတုံးကောငျလားလို့ သူ့မမေကေို မေးတော့ သူ့မမေကေ ဒီလိုပွောပါတယျ “stupid is as stupid does” ( မိုကျမဲတဲ့လုပျရပျတှကေိုလုပျသူတှမှေ ငတုံး) တဲ့။ Forrest ရဲ့ ဘဝတဈလြှောကျလုံး သူ့ကို ငတုံးလို့ချေါခံရတိုငျး ” မိုကျမဲတဲ့လုပျရပျတှကေို လုပျသူတှမှေ ငတုံးလို့ တုံ့ပွနျတော့တာပါပဲ။
နောကျထပျ Forrest ဘယျတော့မှ မမနေို့ငျတဲ့ သူ့မမေရေဲ့ စကားလေးတဈခှနျးရှိပါသေးတယျ။ အဲဒါက “ဘဝဆိုတာ ရသာစုံ ခြောကလကျဘူးတဈဘူးပဲ။ မငျးအတှကျဘာရမယျဆိုတာမသိနိုငျဘူး” တဲ့…
ဒီဇာတျလမျးကတော့ ဇာတျလမျးအကဉျြးဆိုတာကို ပွောပွဖို့ခကျပါတယျ။ ဇာတျလမျးတဈခုလုံးက Forrest ရဲ့ တဈဘဝလုံးမှာ ကွုံရတဲ့ အခကျအခဲ အကပျြအတညျးတှကေို သူမြားနဲ့မတူတဲ့အတှေးအမွငျတှနေဲ့ပဲ ဖွရှေငျးခဲ့ပုံတှကေို ရိုကျပွထားတာဖွဈပါတယျ။ Forrest ရဲ့ ကွိုးစားမှုတှေ၊ အတှေးအမွငျတှကေ ထူးခွားတာကွောငျ့ ယောငျးတို့ ဘဝအခကျအခဲတှနေဲ့ ကွုံတှရေ့တိုငျး ခှနျအားတှရေနစေဖေို့ Forrest Gump ရုပျရှငျကို ကွညျ့ဖို့ အကွံပေးခငျြပါတယျနျော။
Related Article >>> ခဈြခွငျးမတ်ေတာနဲ့ လူသားခငျြးစာနာမှုအတှကျဆို ဒီရုပျရှငျ(၂)ကားကို ကွညျ့ကွညျ့ပါ။
နောကျထပျ ရုပျရှငျတဈကားကတော့ The Blind Side ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျပါ။ ဒီရုပျရှငျဟာ ၂၀၀၉ ခုနှဈမှာ ထှကျရှိခဲ့တဲ့ ရုပျရှငျဖွဈပွီး အျောစကာဆုတှေ သိမျးပိုကျနိုငျခဲ့တဲ့ ရုပျရှငျဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျလမျးက Big Mike ဆိုတဲ့ အငျမတနျထှားကြိုငျးတဲ့ လူမညျးကောငျလေးတဈယောကျနဲ့ သူ့ရဲ့မှေးစားမိခငျလူဖွူအမြိုးသမီးတို့ကွားထဲကမတ်ေတာကို ရိုကျပွထားတာပါ။
Big Mike ဟာ ထှားကြိုငျးတဲ့ခန်ဓာကိုယျနဲ့ မလိုကျအောငျ ကွောကျတတျပွီး စိတျအားငယျတတျသူတဈဦးပါ။ ဒီလိုဖွဈရတာကလညျး သူဟာ ငယျစဉျကတညျးက မိဘမတ်ေတာကို မရရှိခဲ့လို့ပါ။
သူ့ရဲ့ မိခငျဖွဈသူဟာ ဆေးစှဲနသေူဖွဈပွီး ဖခငျကလညျးသဆေုံးသှားပါပွီ။ သူဟာ ငယျစဉျကတညျးက မှေးစားမိဘတှအေိမျမှာကငျြလညျခဲ့ရသလို ဘယျမှာမှလညျးတာရှညျမနဘေဲ ထှကျပွေးလရှေိ့ပါတယျ။
တဈရကျတော့ သူဟာ ကြောငျးနဖေကျသူငယျခငျြးလူဖွူကောငျမလေး ကိုလငျ နဲ့ ရငျးနှီးခှငျ့ရခဲ့သလို သူ့မိဘတှနေဲ့လညျးတှဆေုံ့ခဲ့ပါတယျ။ ကိုလငျရဲ့ မိခငျ Leigh Anne က မိဘမဲ့ Big Mike ရဲ့ ဘဝကိုစာနာတာကွောငျ့ သူတို့အိမျမှာလာရောကျနထေိုငျစပေါတယျ။ Leigh Anne တို့ မိသားစုနဲ့ Big Mike တို့ တဖွညျးဖွညျး သံယောဇဉျဖွဈလာကွပွီးနောကျ Leigh Anne က Big Mike ကိုတရားဝငျမှေးစားပွီး အောငျမွငျတဲ့ကစားသမားတဈဦးဖွဈလာဖို့ ပွုစုပြိုးထောငျပေးမယျလို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတဲ့အခါ….
မတူညီတဲ့လူမြိုးတှဖွေဈပမေဲ့ တဈဦးကိုတဈဦး မတ်ေတာထားကွပုံတှေ၊ မိခငျတဈဦးရဲ့ မတ်ေတာနဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့ ပွုစုစောငျ့ရှောကျမှုက လူသားတဈယောကျကို ပွောငျးလဲပေးနိုငျပုံတှကေို The Blind Side ရုပျရှငျထဲမှာ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး မွငျတှနေို့ငျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ..
ကဲ ယောငျးတို့ အားလပျခြိနျမှာ ဖြျောဖွမှေုတငျသာမက၊ စိတျခှနျအားတှရေနိုငျမယျ့ ဒီရုပျရှငျကားတှကေိုကွညျ့ပွီး အကြိုးရှိရှိဖွတျသနျးနိုငျကွပါစနေျော …
Tags: love, Mother and Son, Movies, parenting, reviews
စာရင်းအင်းပညာနဲ့ ဘယ်လို အလုပ်အကိုင် ရည်မှန်းချက်တွေ ထားနိုင်မလဲ။
ကုသိုလ်လည်းရ၊ ဝမ်းလည်းဝဆိုတဲ့ လူမှုစီးပွားရေးစနစ်
Sugar Cane September 20, 2018